Madaxweyne Ku xigeenka Oo Furay shir lagu gorfaynayo mashaariic lagu magaaleynayo Dawladaha Hoose | Somaliland.Org
Madaxweyne Ku xigeenka Oo Furay shir lagu gorfaynayo mashaariic lagu magaaleynayo Dawladaha Hoose
January 21, 2013	Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) ayaa maanta magaaladda Hargaysa kaga qayb galay bilowga wejiga labaad ee mashruuca horumarinta Dawladaha Hoose ee JPLG.
Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirrada wasaaradaha, Maaliyadda, Qorsheynta, Macdanta iyo Biyaha iyo Wasiir ku xigeenka maamulka gobolada iyo Degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha, halka sidoo kalena ay goob-joog ka ahaayeen qaar ka mid ah maayarrada magaalooyinka Somaliland.
Madaxweyne ku xigeenka oo shirkaasi ka hadlay ayaa talaabo muhiim ah ku tilmaamay taageeradda ay dalalka qaadhaan-bixiyeyaashu ka gaysteen hirgelinta mashruucan, kaasi oo wax ka taraya magaaleynta degmooyinka wadanka.
Md. C/Raxmaan Saylici waxa cadeeyey sida ay nabadgelyadda ka jirta Somaliland ay suurto-gal ka dhigtay in Mashruucan laga fuliyo qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka, waxaanu tilmaamay in mashruucani qeyb ka yahay xidhiidhka dhaqan-dhaqaale ee Somaliland la yeelanayso beesha caalamka.
Madaxweyne Ku xigeenku waxa uu sheegay inay jireen Guullo laga gaadhay mashruucan JPLG iyo caqabado ka hor yimid. Waxaanu qaadhaan-bixiyeyaasha u soo jeediyay in la kordhiyo Tiradda mashruucan horumarinta magaalooyinka lagu soo daro degmooyinka kale ee aan hore ugu jirin ka faa’iidaysiga mashaariicdaas. Mudane C/Raxmaan Saylici waxa uu ku baaqay in mashruucan lagu soo daro magaalooyinka Ceerigaabo, Laascaanood iyo Saylac mustaqbalkana la gaadhsiiyo degmooyinka wadanka oo dhan.
Wasiirka Qorsheynta Qaranka iyo horumarinta Dr Sacad Cali Shire oo ka hadlay faa’iidada Mashruucan ayaa faahfaahiyey sida ay khibradda , aqoonta iyo shaqo abuurista uga korodhsadeen degmooyinkii laga hirgeliyey iyadoo awoodda la saaray maaul daadejinta, xoojinta hay’adaha dawladaha hoose iyo kobcinta adeegyada bulshada sida wadooyinka.
Dr Sacad waxa uu xusay in wejigii hore ee mashruucan ay ka maqnayd kaalintii dawladda dhexe, hase yeeshee wejigan labaad loo xilsaaray guddi uu horkacayo Madaxweyne ku xigeenku oo mashruucaasi hirgelintiisa la socon doona. kulankaas balaadhan waxaa kale oo ka hadlay mas’uuliyiin ay ka mid yahiin Maayarka caasimadda Eng. Yuusuf Warsame Siciid iyo masuuliyiin ka socday Hay’adaha caalamiga ee dawladdaha Hoose wada fulinayaan Mashruucan.
Previous Post“Aqoonsiga Soomaaliya, waxba kama bedalayo mawqifkii qaranimo ee Somaliland”Next PostWar-murtiyeed Lagu Faah-faahiyay Midowga Ururkii UMMADDA Iyo Xisbiga WADDANI (Daawo Sawiraddii oo dhan)	Blog